कला / साहित्य Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - मुलबासी नेपाली भित्र लिङ्गको आकृति देखाएर नाच्ने संस्कृति
मुलबासी नेपाली भित्र लिङ्गको आकृति देखाएर नाच्ने संस्कृति
२४ चैत, काठमाडौं । गुरुङहरुको भेषभुषा, इतिहास, संस्कार–संस्कृति, थातथालो सबै अरु जातिको भन्दा पृथक छ । केही फरक छ । जस्तै क्होलासोथरमा मामाभान्जा बीचमा कहाली लाग्दो घटना घटेको थियो । अरु जातिहरुमा मामाहरुको त्यति साह्रो महत्व हुदैन । तर गुरुङहरुमा त मामा(आँस्यो) विना कुनै पनि कर्मकाण्ड अघि नबढ्ने हुन्छ । यति सम्म की आँस्यो विना स्वर्ग पनि पुगिदैन भन्ने विश्वास छ । गुरुङहरुमा यो विश्वास किन यतिका बलियो साथ स्थापित भयो ? यसको कारण क्होलासोंथरको घटना हो । यदि यो संसारमा कोही कसैलाई क्होलासोंथरबारे भित्रीको भित्री कुरा थाहा छ भने त्यो केवल गुरुङहरुलाई नै थाहा छ ।	थप पढ्नुहोस्
बुटवल र बर्दघाटमा अन्तर्राष्ट्रिय सांगीतिक कार्यक्रमको तयारी
२४ चैत, काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा रुपन्देहीको बुटवल र नवलपरासीको बर्दघाटमा ‘नयाँवर्ष विशेष सांगीतिक कार्यक्रम–२०७५’ हुने भएको छ । इन्भिन्सिवल इभेन्ट एण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिले यही वैशाख १ गते बर्दघाट—१ माकर मोतीबस्ती (नवलपरासी) मा ‘नयाँ वर्ष विशेष सांगीतिक कार्यक्रम–२०७५’ कार्यक्रमको आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा थाइल्याण्डकी डिजे सि क्वइन, चितवनको द रेड्स ब्याण्ड, टि सेभेन डान्स ग्रुप, सुनवल, काठमाडौँबाट डब स्टर माइकल डान्सर, बुटवलका डिजे अतितको प्रस्तुति रहने म्यानेजमेन्ट प्रालिका प्रमुख सागर थापाले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
अभिनेता सलमानलाई ५ वर्ष जेल सजाय
२३ चैत, काठमाडौं । भारतको राजस्थानस्थित एक अदालतले प्रसिद्ध वलिउड अभिनेता सलमान खानलाई सन् १९९८ को अक्टोबरमा दुर्लभ दुई कृष्णसार (मृग) मारेको अभियोगमा बिहीबार पाँच वर्षको जेल सजाय तोकेको छ । तर अदालतले सोही आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका उनका साथीहरू सैयफ अली खान, तावु, नीलम र सोनाली बेन्द्रलगायतलाई भने सफाई दिएको छ । करिब २० वर्ष पहिले हिन्दी सिनेमा ‘हम साथ साथ हें’ को सुटिङको शिलशिलामा सलमानसहितका चार कलाकार र स्थानीय दुश्यन्त सिंहले दुर्लब कृष्णसार मारेको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
तेस्रोलिङ्गी आनिक राना मगरलाई नइ पुरस्कार
२२ चैत, काठमाडौं । गीतकार विश्व वल्लभलाई ‘नइ कोेइलीदेवी पुरस्कार’ प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत तेस्रोलिङ्गी आनिक राना मगरलाई ‘नइ रामलक्ष्मी पुरस्कार’ प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रकाशनका सदस्यसचिव नरेन्द्रराज प्रसाईले जानकारी दिए । साथै सरोद बाजाको प्रवद्र्धन सम्वर्धन र संरमा क्रियाशील प्रथम नारी सरोद वादक रुपा सरोद न्यौपानेलाई ‘नइ खरा गौरव पुरस्कार’ दिइने भएको छ । तीनैैै पुरस्कारको राशि जनही रु ५० हजार रहेका छ ।	थप पढ्नुहोस्
मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले गीत प्रतियोगिता गर्ने
२२ चैत, काठमाडौं । मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानको पाँचौँ पूर्ण बैठकले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र समृद्धि’ विषयमा केन्द्रित राष्ट्रव्यापी ‘राष्ट्रिय गीत प्रतियोगिता–२०७५’ आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा सांसद डा विजय सुब्बाको अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय, गौशालामा मङ्गलबार बसेको बैठकले स्रष्टालाई राष्ट्रिय गीतका लागि आह्वान गरी १० उत्कृष्ट गीत छनोट गरी सङ्गीतबद्ध गरेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्कृष्ट गीतका स्रष्टालाई जनही रु पाँच हजारका साथ सम्मान गरिने बताइएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीको ५४ सदस्यीय भ्रमण टोलिमा अटाए राजेश र दिनेश
२२ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भोलीदेखि हुन लागेको भारतको राजकीय भ्रमणमा पहिलो पटकचलचित्र क्षेत्रसमेत सहभागी गराइएको छ । नेपाली चलचित्र उद्योग र भारतीय चलचित्र उद्योगबीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना गरी एक अर्काको अनुभव आदानप्रदान गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा कलाकर्मीलाई समावेश गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली ५४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार भारतको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका छन् । भ्रमण दलमा लोकप्रिय नायक राजेश हमाल र निर्देशक दिनेश डिसी सहभागी हुनेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
‘यदि तपाईंकी दिदी, बहिनीलाई कसैले तपाईंको आँखा अगाडि नै बलात्कार ….,’ नाटक ‘खुल्ला आकाश’
१९ चैत, काठमाडौं । नाट्यकार अशेष मल्लद्वारा लिखित नाटक ‘खुल्ला आकाश’ आज मञ्चन भएको छ । सर्वनाम थिएटरको ३९ औंँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मल्लद्वारा नै निर्देशित नाटकमा आफ्नी श्रीमतीको बलात्कारीको हत्या गरी कारागारमा आफ्नो मृत्युको दिन कुरिरहेको एक पात्रको मनोदशा नाटकको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ । नाटकमा उसकी श्रीमती ‘शान्ति’ प्रतिको अथाह प्रेम र समर्पणलाई देखाउन खोजिएको छ । नाटकमा बाबुले कसैको हत्या गर्दा उसको सन्तानमा पर्ने सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असरका बारेमा समेत चित्रण गरिएको छ । आफूले हत्या गरे पनि सो पात्रमा अलिकति पनि पश्चात्तापको भावना छैन ।	थप पढ्नुहोस्
नेपालका गिद्ध जोडिको खोज्दै पाकिस्तानमा
१९ चैत, काठमाडौं । नेपालका गिद्ध उडेर अरू देश पुग्छन् कि पुग्दैनन् ? गत वर्षसम्म जवाफ कसैसँग थिएन । अहिले थाहा भयो– नेपालका गिद्ध उडेर भारत र पाकिस्तानसम्म पुग्दारहेछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाल पन्छी संरक्षण संघ (बीसीएन) र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले संयुक्त रूपमा गिद्धको ढाडमा ‘स्याटेलाइट टेलिमेट्री ट्याग’ जोडेपछि नेपाली गिद्ध आहार र जोडीको खोजीमा भारतको हिमाञ्चल प्रदेशका विभिन्न स्थान हुँदै पाकिस्तानसम्मै पुगेको खुलासा भएको हो  ।	थप पढ्नुहोस्
कोलकातामा ‘पानीघट्ट’, प्रवासी नेपाली दंग
१३ फागुन, काठमाडौं । लमजुङको ग्रामीण भेगलाई आधार बनाएर निर्मित नाटक ‘पानीघट्ट’ भारतको कोलकातामा शनिबार मञ्चन गरिएको छ । पानीघट्ट र ठाडोभाकाबारे कुनै जानकारी नभएका दर्शकले नाटक हेरेपछि आफूहरु दंग परेको प्रतिक्रिया दिए । नेपाली संस्कृति र वर्तमान समाजको यथार्थ नाटकमा भेटेको उनीहरुले बताएका छन् । कोलकाताको नागेरबजारस्थित अजितेश मञ्चमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय नाटक उत्सवमा मञ्चित नाटक हेर्न प्रवासी नेपाली तथा गैरनेपालीको भीडभाड थियो । नाट्य युद्धले चौथो शम्भु मित्र एन्ड बिजन भट्टचर्जी स्मृति नाट्य उत्सव आयोजना गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
तामाङ चलचित्र ‘घ्रान’ (कसम) निर्माण हुँदै
२६ माघ, काठमाडौं । तामाङ जातिको संस्कृति तथा भाषा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तामाङ भाषामा चलचित्र घ्रान ‘कसम’ निर्माण गरिने भएको छ । मोक्तान फिल्म्स प्रालिको प्रस्तुतिमा निर्माण गरिने चलचित्रले समाजमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली विकास गर्ने क्रममा सामन्ति वर्गसँगको संघर्ष, वर्ग संघर्षका क्रममा एउटा परिवारको अभिभावकले ज्यान गुमाउन परेको, त्यसपछि उनका सन्ततिले समाजमा समानता, सामाजिक न्याय र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाका बारे कथा समावेश गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्